म सँग यौ न सम्बन्ध राख्दा क्या न्सर निको हुन्छ भन्दै बिरामीलाई डाक्टरले नै …….! « Gaunbeshi
म सँग यौ न सम्बन्ध राख्दा क्या न्सर निको हुन्छ भन्दै बिरामीलाई डाक्टरले नै …….!
काठमाडौं । अहिलेको दुनियाँमा क्यान्सरलाई निकै ख’तर’नाक रोग मानिन्छ, यस रोगको उपचार पनि निकै महँगो मानिन्छ । क्या न्सर रोगलाई नेपाल जस्तो देशमा सबैभन्दा ठूलो रोग मानिन्छ । धेरैको मृ त्यु यसै रोगका कारण हुने गरेको छ ।
यो बीचमा क्या न्सरसँग सम्बन्धित एउटा अच म्मको घ ट ना सार्वजनिक भएको छ । बाहिर आएको खबर अनुसार एक डाक्टरले क्या न्सर रोगीलाई यौ’न स’म्पर्क’ले क्यान्सर निको हुने खुलेको छ ।
तर, त्यो डाक्टर रं’गे’हा’त स’मा’तिए र उनको सबै हर्कतको पर्दा खुल्यो । वास्तवमा यो घ टना इटालीको हो । ‘डेली मेल’ को रिपोर्टका अनुसार एक महिला त्यहाँका प्रसिद्ध डाक्टरकहाँ पुगिन् । उनलाई आफू क्यान्सरको सिकार भएको जानकारी थियो ।
डाक्टरले ति महिलालाई क्या न्सर निको पार्ने भए म सँग स म्बन्ध राख्नु पर्ने बताएका थिए । महिलाले डाक्टरको नियत के हो बुझिनन्, त्यसपछि उनले डाक्टरको लागि योजना पनि बनाइन् । ती महिलाले एउटा च्यानललाई सम्पर्क गरी सबै कुरा सुनाइन् ।
महिला फेरि डाक्टरकहाँ पुगेपछि डाक्टरले उनलाई होटलको कोठामा लगेर गएका थिए । डाक्टरका सबै क्रियाकलाप क्यामेरामा रेकर्ड भइरहेका थिए र त्यही बेला च्यानलको सम्पूर्ण टोली त्यहाँ पुग्यो । जब डाक्टरले उनी स्टिङ अपरेसनको शि’का’र भ’ए’को थाहा पाए तब उनको हो श उ ड्यो ।